बैंकले जनता र उद्योगी दुबैलाई ठगे « Clickmandu
बैंकले जनता र उद्योगी दुबैलाई ठगे
प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७३, बुधबार १०:०१
सरकारले बैकिङ क्षेत्रबाट कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको भनेको छ । उत्पादन गर्ने तपाईहरुले हो । तपाईहरुले उत्पादन गर्न नसक्नुको खास कारण के हो ?
उत्पादन गर्ने भनेको हामीले हो । यहाँ हामीले भनेको कुरालाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिएन । यसमा निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने र निजी क्षेत्रको पनि केही कमजोरी हो । व्यवसायीहरुले पनि आफ्नो कुरा प्रष्ट राख्न नसकेको पनि हुन सक्छ । तर, राज्यलाई हामीले भने पनि राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरुको माग्न मात्र आए भन्ने बुझाई छ । अहिले पनि कर्मचारी र राज्य संयन्त्रमा बस्नेलाई व्यापारी माग्नको लागि मात्र आउँछन् भन्ने छ । हामीहरु माग्नको लागि नै राज्य समक्ष जाने हो । समस्या हटाउने अधिकारी राज्य संयन्त्रमा बस्नेसँग मात्र छ । हामीले उनीहरुलाई सहमत गराउने हो । हामीले गर्नुपर्छ भनेको काम नगरिदिने प्रबृत्तिको कारण यस्तो अबस्था आएको हो ।
सरकारले ल्याएका नीति नियमहरु उद्योगमैत्री भएनन् भन्ने हो ?
२०४९ सालको ऐन आएपछि औद्योगिक क्षेत्र चलायमान भएको हो । तत्कालिन अवस्थामा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको बिक्री करमा ५० छुट लगायत आयकरमा छुट दिएको कारण औद्योगिक क्षेत्रको विकास भएको थियो । त्यही छुटको कारण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । अहिले नेपालमा उत्पादन गरेको सामान बाहिर उत्पादन भएको सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनको लागि राज्यले कुनै पहल गरेन । राज्यलाई १ डलर आम्दानी भयो भने त्यो रकम उद्योगीले कच्चा पदार्थ आयातको लागि खर्च गर्र्छ । जसमा १३ प्रतिशत सरकारलाई मुल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) तिर्छ । १५ प्रतिशत भन्सार करसहित रोजगारीको सिर्जना गरेको हुन्छ । उसले निर्यात गर्छ भने उसलाई सहुलियत दिनुपर्ने कुरा केही पनि छैन । उत्पादन बृद्धि गर्न हामी लागि परेका पनि छौं । यो वर्ष उत्पादन बढ्ने छ । अहिले बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या छ । उत्पादन गर्नेभन्दा आयात गर्नेमा मानिसहरु बढी किन लागेका छन् भने यसमा जोखिम कम छ । र, नाफा बढी छ ।
मैले बैंकको पैसा तिरेन भने मेरो १० ओटा व्यवसायमा सबै व्यवसाय खराब हुन्छ । मेरो व्यवसायमा पैसा नउठेमा उठाउने कुनै तरिका छैन । तर, बैंकलाई धेरै अधिकार दिएको छ ।
०४९ सालमै आएको औद्योगिक ऐनले सुविधा दियो भनेर आफै भन्नुहुन्छ, २४ वर्षसम्म सुविधा पाउँदा पनि उद्योगीको क्षमता किन बढेन ?
२४ वर्षदेखि सुविधा पाएको होइन । औद्योगिक नीति अनुसार नियमावली बनाउन ६ वर्ष बित्यो । यसमा महासंघले धेरै पहल गरेको हो । अरु ऐनले दिएको सुविधा हरेक वर्ष बजेटसँगै आउने आर्थिक विधेयकले कटौति गर्दै गयो । यसबाट उद्योग बन्द हुँदै गए । र, नयाँ आउन सकेनन् । उद्योग भनेको व्यवसाय जस्तो होइन । राज्यले यसमा क्रमिक रुपले कर पाउँदै जान्छ । व्यवसायमा सामान ल्याउना साथ राज्यले कर पाउँछ । फाइदा भयो भने बिक्री गर्छ । भएन भने अर्को सामान लिएर आउँछ । उद्योगमा परिवर्तन सजिलो छैन । मेसिन राखेपछि चेन्ज गर्न सकिदैन । अहिले कुरा उठेको छ कि प्लास्टिक उद्योगको मेसिनबाट झोला बनाउ भनेर । कुनै पनि मेसिन एउटा उद्योगमा लगाएपछि त्यो फलामको ढिंको हो । यस्ता प्रकारका समस्या नीति निर्माताले नबुझिदिदा समस्या थपिएको छ ।
अर्काे कुरा बैंकको पनि छ । अहिले बैंकहरुले किन उद्योगमा लगानी गरेका छैनन् । एक जना बैंकरले भनेका थिए कि उनीहरुको लागि जलविद्युत्मा लगानी गर्नुभन्दा गाडी खरिदमा कर्जा दिनु फाइदा छ । बैंक पनि फाइदाको लागि हो । गाडीमा १५ प्रतिशत कस्टमरले तिरेको छ । दुई चार किस्ता तिरेको हुन्छ । त्यो गाडीमा ऋण उठेन भने लिलाम गर्दा ५० प्रतिशत पैसा आउँछ । तर,जलविद्युत्मा लगानी गर्दा चलाउन सकेन भने त्यो बिक्री गर्दा कवाडीको भाउँमा बिक्री गर्नुपर्छ । बैंक र हामी व्यवसायी दुई क्षेत्रको हो । यो भनेको टेबलको दुई पार्ट हो । व्यवसायी र बैंक कहिले पनि एउटै हुन सक्दैन । भन्न त बैंकलाई पनि निजी क्षेत्र भनिएको छ । यसमा मलाई पच्दैन । उद्योगीले बैंक र सरकारको लागि काम गर्छ । हामीलाई पनि लगानी सुरक्षित हुने केही कानून बन्नुपर्छ । हामीले बैंकलाई किन सुरक्षण दिएको भने बैंकमा जनताको पैसा छ । जनताको पैसाको नाममा बैंकलाई बढी सुरक्षा प्रदान गरियो । अहिले बैंकको लाइसेन्स दिने हो भने १०० वटा पनि बैंक थपिन सक्छ । बैंकहरुको सुरक्षा व्यवसायमा सय प्रतिशत रकममा ८० प्रतिशत रकम जनताको हुन्छ । मैले १ रुपैयाँ लगाएर जनताबाट अनलिमिटेड पैसा लिन पाउने भएपछि यो फाइदाको व्यवसाय छ ।
बैंकले कसरी उद्योगीलाई पेलिरहेका छन् भनेर म एउटा उदाहरण दिन्छु । जस्तै अहिले बैंकले नयाँ निक्षेपमा ब्याजदर बढेको भनेर हिजोको ऋणको ब्याजदर पनि बढाएका छन् । बैंकले हामीलाई शोषण गरेर झन बढी लाभांश खान्छन् । भूकम्प हुँदा पनि बैंक फाइदामा छ भने नाकाबन्दी हुँदापनि फाइदामा छन् । राज्य संयन्त्रमा बस्नेले यस्तो नियम बनाएको छ, जसले गर्दा बैंक जहिले पनि फाइदामा गएको छ । हामी कालोसूचिमा पर्ने भएको हुँदा घरखेत बेचेर भएपनि बैंकको ऋण तिर्नुपर्छ ।
मैले बैंकको पैसा तिरेन भने मेरो १० ओटा व्यवसायमा सबै व्यवसाय खराब हुन्छ । मेरो व्यवसायमा पैसा नउठेमा उठाउने कुनै तरिका छैन । तर, बैंकलाई धेरै अधिकार दिएको छ । मैले बैंकलाई सुरक्षा दिएकोमा विरोध गरेको होइन । हामी उद्योगी व्यवसायीको पनि लगानी सुरक्षा हुनुपर्छ भनेको मात्र हो । अहिले औद्योगिक व्यववसायमा सुरक्षित कारोवार ऐनमा हामीले खोजेका कुरा आएका छैनन् । मैले कसैलाई क्रेडिटमा सामान बिक्री गरे भने उसको गोदाममा मेरो ओनरशिप हुनुपर्छ । यसको लागि राज्यले हरेक पटक कारोवार रजिष्टर गर्नुपर्ने व्यवस्था ग¥यो । बिक्री र खरिदकर्ताबीच समझदारी भएपछि त्यो सम्झौतालाई मान्नुपर्ने होइन । सामान क्रेडिटमा दियो । दिएको पसल बन्द गरेर गयो भने उठाउँने ठाउँ छैन । उद्योग भनेको न्यून नाफामा धेरै सामान बिक्री गरेर नाफा गर्ने क्षेत्र हो । यसमा सानो गल्तीले ठूलो नोक्सान हुन्छ । बैंकले यसमा कुनैपनि सहुलियत दिदैन । म राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि एक जनाले बैंकबाट पैसा लिएर काम गरोस्, अनि उसलाई थाहा हुनेछ कि कत्ति गा¥यो हुन्छ भनेर ।
लिमिटेड कम्पनी भएपछि सिमित दायित्व हुन्छ । राज्यले एउटा कानूनी दायित्व बनाएको हो । जस्तो कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशकले गल्ती गरेमा उसलाई कारवाही गर्नुपर्छ । रक्सी कम्पनीमा के भएको छ भने हिजो दुई तीनवटा कम्पनीले बिगार गरेको हो । रक्सी कम्पनीले बिगार मात्र गरेको होइन राज्यले आफ्नो कर गुमायो । त्यहाँ एक दुई जनाले गल्ती गरेको हो । जसले आर्थिक घोटाला गर्ने गरेको छ उसलाई आर्थिक रुपमा जरिमाना गर । अहिले कालो बजारी ऐन भनेको छ । उसलाई ५ वर्ष जेलमा हालेर हुँदैन । राज्यले अनुगमन बढाउनुपर्छ । टेस्टिङको मापदन्ड स्पष्ट छैन । त्यसपछि आफुखुसी सरकारी अधिकारीले जरिमाना गर्ने गर्छन् । उद्योगलाई जरिमाना गर्दै हिड्छन् । उद्योगलाई बचाउन राज्यले केही व्यवस्था गरेको छैन । हिमाल सिमेन्ट पूर्ण रुपमा कवाडीमा गयो । त्यो उद्योग आएपछि त्यहाँ घर आएको हो । पछि वातावरणको मुद्दा आयो । यस्ता समस्या अनगिन्ती छन् ।
राज्यले उद्योग चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । निजीकरण गर्ने वित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता भएपछि ती उद्योग चल्न नसकेका हुन् । जग्गा बेचेर पनि पैसा आउँछ भने किन छोड्ने भनेर जग्गा बिक्री गर्नु परेको हो ।
निजी क्षेत्रपनि जिम्मेबार देखिएन, जुन क्षेत्रमा राज्यले उपस्थिति छैन, त्यहाँ बढी बिकृति भएको होइन र ?
राज्यको नियमन निकाय बलियो हुनुपर्छ । राजनीति भनेको स्थायी सरकार हो । यहाँ मिलिजुली सरकार चलाएको छ । राज्य चलाउनेहरुबीच नै असन्तोष र बिरोध छ । निजी क्षेत्र भनेको मानिस नै हो । नियमन गर्ने काम राज्यको हो । टेलिकम सेवामा सरकारी संलग्नता छ । निजी क्षेत्र आएपछि सुलभ भएको हो । टेलिकमले हामीलाई धेरै ठगेको थियो । राज्य एकदमै इमान्दार र निजी क्षेत्र साह्रै बद्मास छ भनेर जसरी हल्ला गर्ने गरिन्छ, यो सत्य होइन । र, अर्काे कुरा निजी क्षेत्रले काम गर्न नसक्ने ठाउमा मात्रै राज्यले गर्ने हो । यो कुरा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
राज्यबाट निजी क्षेत्रले लिएका उद्योग कहाँ छन्, निजी क्षेत्रले चलाउन त सकेन ?
राज्यले १४ उद्योग निजीकरण गरेको हो । रोप वे कवाडी भयो । ती उद्योग चलेको भए नेपाली जनताले तिरेको कर उनीहरुलाई बचाउनको लागि खर्च गर्नुपर्ने थियो । निजी क्षेत्रमा पठाएको कारण सरकारको पैसा बचेको छ । खरिद गरेपछि उद्योग चलाउँछ कि बन्द गर्छ भन्ने कुरा उसको हक हो । राज्यले उद्योग चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई दिएको हो । निजीकरण गर्ने वित्तिकै राजनीतिक अस्थिरता भएपछि ती उद्योग चल्न नसकेका हुन् । जग्गा बेचेर पनि पैसा आउँछ भने किन छोड्ने भनेर जग्गा बिक्री गर्नु परेको हो ।
राज्यबाट निजीकरणको नाममा उद्योग लिने, अनि जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने, यो कहाँबाट इमान्दारिता भयो ?
जग्गा प्लटिङ गरेर बेचेको छैन । यसमा इमान्दारिताको कुरा पनि आउदैन । राज्यलाई पैसा तिरेर किनेको हो । चीनमा राज्यले चलाएको कम्पनी निजी क्षेत्रलाई दिएको छ । सरकारले त्यही कम्पनीको म्यानेजरलाई त्यो उद्योग चलाउन दियो । राज्यले त्यहाँको कर्मचारीलाई चाहिने सुविधा आफैले दियो । चीनमा त्यसै अर्बपति जन्मेका छैनन् । निजीकरणको नाममा यो उद्योग खरिद गर्न भन्यो । कुनैपनि उद्योगमा तीन चारवटा युनियनहरु बन्छन् । नियममा २५ प्रतिशत कर्मचारी युनियन बन्नको लागि हुनुपर्छ भनिएको छ । आज ६ वटासम्म युनियन संचालनमा छन् । यो कसरी सम्भब छ ? २५ प्रतिशत कर्मचारी हुनै पर्छ भनेपछि सबै कर्मचारी युनियनमै लागे पनि बढीमा ४ वटा मात्र सम्भब हुनुपर्ने हो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा प्रतिष्ठानमा एउटा मात्र युनियन बनाउने सहमती भएको थियो । युनियनले सबै कर्मचारीको हितमा काम गर्ने हो । राजनीतिक पार्टी अनुसार युनियन किन चाहियो । हिजोको दिनमा व्यवस्था परिवर्तन गर्न संगठन चाहिएको थियो । अहिले मजदुरको नेता भएपछि काम गर्न नपर्ने । व्यवस्था परिवर्तन भएपछि नेताहरु सक्षम छन् । उनीहरुले सबैलाई टिका लगाएर हिड्न हुँदैन ।
अर्काे कुरा उद्योगमन्त्री हुँदा गर्छु भनेको काम त्यही ब्यक्ति अर्थमन्त्री बनेपछि गर्न सक्दिन भन्छ । वातावरण मन्त्रालयले उद्योग बन्द गर भनेर चिठी लेखेको हुन्छ । अर्थले चलाउन भनेको हुन्छ । खानी चलाउनको लागि रुख नकाट्न भनेको हुन्छ । ढुंगा निकाल्न पाइदैन । अनि हामी कसरी समृद्ध बन्ने । हामीकहाँ पानी र ढुंगा छ । त्यही बिक्री गर्नुपर्छ । अहिले भारतमा ढुंगा निकासी बन्द गरिएको छ । तर,रातारात पैसा खुवाएर चोरी निकासी भएको छ । बैध रुपमा निकासी गर्न नहुने अनि अबैध गर्न हुने ? यो के गरिएको ? यसले राज्यले केही पनि फाइदा भएको छैन ।
हामीले गर्न सक्ने भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हो । आज एउटा मेडिकल कलेजले ५ हजार व्यक्तिले विदेशबाट पठाउने जति विदेशी मुद्रा आर्जन गर्छ । मेडिकल कजेलमा राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन भएन । निजी मेडिकल कलेज नभएको भए राज्यले अहिले दिए जस्तो स्वास्थ्य सेवा दिन सक्दैनथ्यो । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा ६० वर्षदेखि काम गरेको छ । अहिलेसम्म के भयो ? यस्ता कुराको पनि हिसाब किताब हुनुपर्छ ।
बैकिङ क्षेत्र र तपाईहरुको सम्बन्ध बिग्रेको किन हो ?
सम्बन्ध बिग्रेको छैन । बैकिङ क्षेत्रले कार्टेलिङ गरेको छ । जनतालाई पनि ठगेको छ । एक डलर साट्दा ६० पैसा फाइदा लिन्छ । आज एलसी खोलेर पठाउँदा पनि बढी फाइदा लिएको छ । सर्भिस चार्जमा त्यस्तै छ । अहिले चेक साट्न पनि पैसा लाग्छ । नन फन्डिङ बिजनेशमा धेरै फाइदा लिएको छ । हिजो लिएको ऋणमा पनि ब्याज बढाइएको छ । बीमा कम्पनीको अबस्था पनि उस्तै छ । बीमा गर्न सजिलो छ तर दाबी भुक्तानी पाइदैन । गाडी दर्ता गर्दा बीमा अनिवार्य छ । अनिवार्य बीमा भएपछि बीमा शुल्क कम हुनुपर्ने हो । बैंक धेरै भएपनि प्रतिस्पर्धा भएन । अहिलेपनि बचत खाताको ब्याज १ प्रतिशत नै छ । जनताबाट पैसा लिएको आधारमा भएको फाइदा कि त जनताले नै पाउनु पर्छ कि त उद्योग गर्ने ब्यक्तिले पाउनु पर्छ । तर यहाँ त्यो फाइदा बैंकले मात्र लिइरहेका छन् ।
हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर पुँजी वृद्धिको नीतिलाई राष्ट्र बैंकले नै ‘पङ्गु’ बनायो
कृषि, होटल, रियलस्टेट, सूचना प्रविधि, नविकरणिय उर्जा तथा उत्पादनमुलक उद्योगमा लगानी रहेको गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष
दुई बैंक मुक्तिनाथमा गाभिन्छौं भन्दा मानेनौं, आफ्नै बलबूँताले वाणिज्य बैंक बन्छौं
प्रद्युम्न पोखरेल डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसियनका अध्यक्ष हुन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गरेका पोखरेलले
अवैध मोबाइल ल्याउने गिरोहले अनलाइनबाट बिक्री गरिरहेका छन्
नेपालमा मोबाइल आयात ह्वात्तै बढेको छ । पाँच महिनामा २३ अर्बको मोबाइल आयात भइरहेको बेला